Wang Li : Pameran Lukisan untuk Membantu Sesama
Setelah menikah dengan suami Taiwannya, Wang Li asal Tiongkok menetap di Changhua. Sang suami yang lulusan sekolah kedokteran memutuskan beternak ayam di kampung halamannya. Wang Li pun melalui masa-m...
ကြက်မွေးမြူသော တရုတ်ကြင်ဖော်က ပန်းချီပြပွဲ ပြုလုပ်ခြင်း
တရုတ်ကြင်ဖော်(王莉)(ဝမ်လိ)သည် ယခင်က ပန်းချီဆရာမဖြစ်ကာ အိမ်ထောင်ကျပြီး နောက် ဆေးပညာသင်ကြားသောခင်ပွန်းသည်နှင့်အတူ (彰化)(ကျန်းဟွ)တို့ ပြောင်းရွှေ့လာပြီး ကြက်မွေးမြူနေပါသည်။ သူမသည် ယောက္ခထီး၊ ယောက္ခမများ...
အမေရိကန်မှ ဆရာဝန်က ထိုင်ဝမ်တွင် ၂၇ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း
ဆရာဝန်(聶梅珍)(ညက်မေကျိန်း)သည် အမေရိကန်ရှိ ကိုလံဘီယာဆေးတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရကာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် သာသနာပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့နှင့် ထိုင်ဝမ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ထိုင်ပေ (馬偕)(မာကျေး)ဆေးရုံတွင်၂၇ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင...
ကျောင်းသားများက ကျောင်းဆင်းပွဲတွင် အာရုံကြောခံစားမှု ကင်းမဲ့သူများအတွက် အလှူငွေများ ကောက်ခံပေးခြင်း
(高雄)(ကောင်းရှုံ)မြို့(中山)(ကျုံးရှန်း)စီးပွားရေးပညာသင်ကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြား နေသော အရှေ့တောင်အာရှမှ ကျောင်းသားများသည် (創世)(ချွမ့်ရှစ်)ဖောင်ဒေးရှင်းတွင် လည်း လုပ်အားပေးနေသော ကျောင်းသားများဖြစ်ပါသည်...
အသက် ၇၅ နှစ်အရွယ်ရှိ တရုတ်ကြင်ဖော်အဖွားအိုတစ်ဦးသည် ၅ လပိုင်းကုန်က ခင်ပွန်း သည် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး သူမနေထိုင်သောအိမ်သည်လည်း ဟောင်းနွမ်းကာ နေထိုင်၍မရသော အခြေအနေတွင် ရှိနေသဖြင့် လမ်းဘေးတွင် နေထိုင်ရပ...
(新竹)(ရှင်းကျူ)မြို့ရှိ ဗီယက်နမ်ကြင်ဖော်(黎氏苹)(လီရှစ်ဖျင်)သည် လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ခန့်က ထိုင်ဝမ်သို့ အိမ်ထောင်ကျကာ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ အိမ်သားများကဗီယက်နမ်ဟင်းကို မနှစ်သက်သဖြင့် သူမက ထိုင်ဝမ်-ဗီယက်နမ် အ...
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၌ ဆရာဝန်များရွေးချယ်ခန့်ထားရာ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ ကသာ ခန့််အပ်ပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်နိုင်မည့် မူအသစ်ကိ...
ဆရာ၊ ဆရာမများ အားလပ်ချိန်တွင် အတတ်ပညာဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေရှာနိုင်ဟု ပညာရေး ဝန်ကြီးပြော
ဆရာ၊ ဆရာမများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အတတ်ပညာဖြင့် အားလပ်ချိန်တွင်ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေ ရှာဖွေနိုင်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်စန်းရီက ပြောကြားလိုက်ပါသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမများြ...
တနသာင်္ရီဒေသတွင် ယခုပညာသင်နှစ်အတွင်း အခြေခံပညာကျောင်းတစ်ရာကျော်ကို အဆင့်တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့
တနသာင်္ရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ယခုပညာသင်နှစ်၌ အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း၁၆၀ ကျော်ကို အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသားသုံးသိန်းကျော်ရှိလာကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ ဒေသအတွင်း ကိုယ့်အားကိုယ်...
TESDA pours P17.480 million on training scholars
The Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) said it will pour some P17.480 million worth of scholarship vouchers onatechnical vocational training backed by three partner industr...